Cabsi soo wajahdey Soomaalida Kenya & Uganda (Maxaa soo kordhay?) | Hadalsame Media
Home Caafimaadka Cabsi soo wajahdey Soomaalida Kenya & Uganda (Maxaa soo kordhay?)
Cabsi soo wajahdey Soomaalida Kenya & Uganda (Maxaa soo kordhay?)
(Kericho) 17 Juun 2019 – Qof bukaan ah oo ka yimid Malaba oo ah Galbeedka Kenya ayaa la dhigay isbitaalka Kericho County Referral Hospital halkaasoo lagu karaantiilay kaddib markii kiisas dhimasho oo cudurka Ebola laga soo sheegay dalka Uganda.
Haweenaydan bukaanka ah ayaa lagu arkay wax u qaab eg astaamaha cudurka Ebola, waxaana xalay bilowgii la dhigay Siloam Hospital.
Dr David Ekuwam, oo ah madaxa caafimaadka ismaamulka Kericho ayaa sheegay in saami dhiig ah oo haweenaydan laga qaaday loo diray shaybaar ku yaalla Mahcadka Daraasaadka Caafimaadka ee Kenya Medical Research Institute (Kemri) si lo eego.
Jawaabta ayaa soo bixi doonta 12-24 saacadood gudohood, waxaana la sheegay in haweenaydan oo deggan Malaba oo ah xadka Uganda ay u socotey ninkeeda oo ky nool Kericho.
Arrintan ayaa walaacinaysa shacabka ku nool Uganda iyo Kenya oo ay Soomaalidu ku jirto.
Previous articleCoodka CAWAD lagu casuumayo cid ka mudan ku CAAWIYA!
Next article”Waa hareereeysan nahay halisna waa ku jirnaa!!” – Kenya oo ka walaacsan isbahaysi ay sheegtay inuu ka dhexeeyo Somalia-Itoobiya-Eritrea